ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: လင်းယုန်မ နှင့် မြေခွေးမ
လင်းယုန်မ နှင့် မြေခွေးမ
လင်းယုန်မ နှင့် မြေခွေးမတို့ဟာ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ကြပြီးနောက် နီးကပ်စွာ နေထိုင်ကြလျှင် ပိုမိုရင်းနှီးကြလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင် မှာ နေကြတယ်. .
သစ်ပင် အပေါ်မှာ လင်းယုန်မ က အသိုက်လုပ်တယ်. . . မြေခွေးမက အပင် အောက်ချုံ ထဲမှာ ကလေးတွေနေဖို့ နေရာလုပ်ထားတယ်. . . တစ်နေ့တော့ မြေခွေးမ အစာရှာထွက်တုန်း ဗိုက်ဆာနေတဲ့ လင်းယုန်မဟာ ချုံထဲ ထိုးဆင်းခဲ့ပြိး မြေခွေးပေါက်ကလေးတွေကို ချီသွားပါရောတဲ့ . . . ဒါကြောင့် လင်းယုန်မနှင့် သူ့ကလေးတွေ အဖို့ အစာရလိုက်တယ်. . .
မြေခွေးမ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ အဖြစ်မှန်ကို သိရပြီး ကလေးတွေ ဆုံးရှုံးတာက တစ်မျိုး လင်းယုန်မကို ကလဲ့စား မချေနိုင်တာက တစ်မျိုးနဲ့ အတော် ခံစားရတယ်. . .ကုန်းမှာပဲ သွားလာနိုင်သူက လင်းယုန်ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ဖမ်းနိုင်ပါ့မလဲ. .
သူတတ်နိုင်တာက ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ဆဲဆို ရေရွတ်ရုံပါပဲ. . . ဒါပေမယ့် မကြာပါဘူးလေ. . မိတ်ဆွေ ကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက်တဲ့သူကို အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်. .
လူအချို့ဟာ ဆိတ်တစ်ကောင်ကို ယဇ်ပူဇော် ထားကြတယ်. . .ဒါကိုလင်းယုန်မက တစ်ဟုန်ထိုး ဆင်းလာပြီး နတ်စင် ပေါ်က မီးမြှိုက်လောင်နေတဲ့ ၀မ်းတွင်း ကလီစာတွေကို သူ့အသိုက် ဆီ ချီသွားတယ်. ... အဲဒီအချိန် မှာ လေပြင်းကျလာတဲ့အတွက် လေယပ် သလို ဖြစ်ပြီး အသိုက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ သစ်ခြောက်ကလေးတွေကို မီးစွဲလောင် ပါလေရော တဲ့. . .
အတောင်မစုံ မပျံနိုင်သေးတဲ့ . . . ငှက်ပေါက်ကလေးတွေဟာ မီးလောင် ခံလိုက်ရပြီးတော့ အောက်ကို ကျသွားတယ်. . ဒီအချိန်မှာ မြေခွေးမဟာ ငှက်ပေါက် ကလေးတွေဆီ ပြေးလာပြီး လင်းယုန်မရဲ့ မျက်စိအောက်မှာပဲ အားလုံးကို စားပစ်လိုက်တယ်. .
(ဒီပုံပြင်ကလေးကတော့ မိတ်ဆွေ ကျင့်ဝတ်ကို ချိုးဖောက်ရင် ကိုယ်က အားနည်းချက်ရှိလို့ ဒဏ်မခတ်နိုင်ပေမယ့်. . . ဘုရားသခင် ရဲ့ အပြစ်ပေးမှုကိုတော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး လို့ပြောတာပါ. . . )
ရေးသားသူ poemflower at Monday, September 27, 2010
ဒေါင်းမင်း September 27, 2010 at 8:54 PM
မြစ်ကျိုးအင်း September 27, 2010 at 9:38 PM
ဒီစာကို လူတစ်ယောက်ကို ဖတ်စေချင်သေးတယ်။
Thi Ha Mg September 27, 2010 at 10:41 PM
၀ဠ် မှာ အမြဲ၊ ငရဲ မှာ အပ တဲ့။ ၀ဠ် ဆိုတာ အနှေး နဲ့ အမြန် လည် တာပါပဲ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 28, 2010 at 2:32 AM
မကောင်းမှုဟာ အရိပ်လို လိုက်ပါနေတယ်လို့ လက်ခံမိပါတယ်..
သူများမကောင်းကြံရင်လည်း ကိုယ်တိုင်တစ်နေ့တော့ ပြန်ခံရဦးမှာပါ။ ဒီပုံပြင်လေး နမူနာ ယူသင့်တယ်။
YoungGun October 1, 2010 at 3:49 PM
အီစွတ်ပုံပြင်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မရိုး၊နိုင်အောင်ပဲ။
Army Soul October 2, 2010 at 12:24 PM
ကိုယ့်ရန်သူကို တနေ့မှာ အတုံ့အလှည့်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးက တိုက်ခိုက်သွားနိုင်တာပဲ..
မျက်စိနာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ပျောက်ကင်းအောင်
ဘုရားအလောင်း တောထွက်ခါစ၌ ဗိမ္မိသာရမင်း က ထီးနန်းလှူ...
အချိုရည်သောက်တဲ့အကျင့်ကို . . ဖျောက်ပါ
အလုပ်ဖြင့် ကိလေသာကို ပယ်သတ်ခြင်း